Taariikh cayaareedka Asamoah Gyan - BBC News Somali
Taariikh cayaareedka Asamoah Gyan
Asmaoah Gyan shaki la'aan intii uu ciyaarayay waxaa uu ugu wanaagsanaa labo kulan oo heer sare ah oo tartamo waaweyn uu dalkiisa Ghana u saftay.
Sanadku waxaa uu ugu bilawday Gyan si wanaagsan isagoo dalkiisa ka caawiyay inuu soo gaaro ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaramada Afrika taas oo dalka Masar uu 1-0 kaga badiyay Ghana.
Iyadoo dalka Ghana ay ka maqnaayeen ciyaartoy muhiim ah sida Stephen Appiah, Sulley Muntari, John Mensah iyo Michael Essien tartankii bishii Jannaayo lagu qabtay dalka Angola, ayaa kooxda dhallinta yar ee Xiddigaha Madow waxay u jeesteen Gyan inuu noqdo midka kooxda dhiirri geliya.
Halkii la doonayay ayuu gaaray waxaana uu soo bandhigay ciyaar heer sare ah isagoo dhaliyay saddex ka mid ah afarta gool ee dalkiisa ku caawisay inuu u soo baxo ciyaarta kama dambaysta ah markii ugu horreysay muddo 18 sano ah.
Ciyaartoygan 24-ka jirka ah waxaa uu wacdaro ka dhigay tartankii koobka adduunka ee lagu qabtay dalka South Africa lix bilood kaddib iyadoo saddex gool oo uu tartankaas ka dhaliyay ay dalkiisa Ghana soo gaarsiisay siddeedda kooxood ee soo baxay.
Halyeynimada Gyan ee tartammada caalamiga ah waxay isaga ka dhigtay inuu noqdo laacibka 2aad ee Afrika ugu gool dhalinta badan taariikhda koobka adduunka, waxaana ka horreeya oo keliya ciyaartoyga caanka ah ee Roger Milla ee reer Cameroon.
Laakiin faa''iidooyinka uu Gyan keenay sanadkan kuma ekayn kooxda Xiddigaha Madow oo keliya.
Heerka naadiyada, 13 gool oo uu u dhaliyay kooxda dalka Faransiiska ee Rennes ayaa waxay gaarsiisay kooxdaas, oo meel dhexe joogtay, inay kaalinta 9aad ka gasho liiska derajada kooxaha.
Waxaa uu kasbaday in kooxda Sunderland ay ku soo gadato lacagtii ugu badnayd ee abid ay ciyaartoy ku iibsato bishii August waxaana uu muujiyay ciyaar lala yaabay kulankii ugu horreeyay ee uu kooxdaas u saftay isagoo dhaliyay gool ay 1-1 barbarro kula noqdeen kooxda Wigan.
Dhinaca uu ku liito marka laga eego, waxaa u suurta geli weyday inuu dhaliyo gool ku laad ama penalty loo dhigay daqiiqaddii ugu dambaysay ciyaar ay la yeesheen dalka Uruguay taas oo qaaradda Afrika ka reebtay inay markii ugu horreysay u soo baxdo afarta kooxood ee isugu soo hara koobka adduunka bishii July.
Waxaa kaloo uu ku xanaaqay ciyaartoy waxna ku dhuftay mar ay wada ciyaarayeen dalka Sudan kulan loogu soo baxayay koobka qaramada Afrika bishii la soo dhaafay taas oo keentay in ciyaarta laga saaro.
Inkastoo aan loo aqoonsanayn xiddig aad u sarreeya, haddana FIFA waxay aqoonsatay ciyaar wanaaggiisa waxayna ku dartay liis 23 ciyaartoy oo loo magacaabay in laga soo xulo ciyaaroyga sanadkan ugu wanaagsan adduunka.
Khabiir la yiraa Ibrahim Sannie ayaa wax ka qoray Asamoah Gyan.
Sida ka muuqata ciyaaraha uu u saftay naadiga iyo dalkiisa labadaba sanadka 2010, waxaan qabaa inuusan jirin ciyaartoy kale oo ka mudan laacibka reer Ghana ee Asamoah Gyan inuu sanadkan helo abaalmarinta BBC ee ciyaartoyda Afrika.
Mar kasta way dhacdaa in marka laga fekerayo ciyaartoyda la siinayo abaalmarintan, aad loo tixgeliyo kuwa ka ciyaara naadiyada waaweyn ee Yurub.
Sidaasi darteed Ciyaartoyda ay ka midka yihiin gool dhaliyaha Chelsea ee reer Ivory Coast, Didier Drogba iyo laacibka Inter Milan, Samuel Eto'o, oo u dhashay dalka Cameroon ayaa dadka qaar u arki doonaan inay safka hore uga jiraan musharraxiinta sanadkan ee abaalmarintaas sababtoo ah maqaamka sare ee naadiyadooda.
Si kastaba ha ahaatee, markii si taxaddar leh looga fiirsaday ciyaaraha ah ay soo bandhigeen waxay muujisay inay naadiyadooda oo keliya si wanaagsan ugu ciyaaraan.
Gyan isagu waa uu ka duwan yahay waayo waxaa uu door muhiim ah ka qaatay guushii kooxda Xiddigaha Madow ee kaalinta 2aad ka gashay koobka Qaramada Afrika.
Laacibkaas 25ka jirka ah waxaa uu dhaliyay saddex gool oo ka mid ahaa afarta gool ee Ghana ugu soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah ee qaaradda Afrika ee dalka Angola lagu qabtay bishii Jannaayo halkaas oo dalka Masar uu ku badiyay 1-0.
Waxaa kaloo uu lix bilood kaddib laf dhabar u noqday tartankii koobka adduunka oo kooxda xulka ee Xiddigaha Madow ay ahaayeen tan keliya ee qaaradda Afrika ka socotay ee gaartay siddeedda kooxood ee ugu dambeeya tartanka. Xusuuso kooxihii Afrika ee safka hore kaga jiray tartanka si niyadjab ah ayay ugu hareen wareeggii koowaad.
Gyan waxaa uu dalkiisa u dhaliyay saddex gool si ay ugu biiraan dalalka Senegal iyo Cameroon oo ahaa kooxaha Afrikaanka ah ee keliya ee ka ciyaaray siddeedda ugu dambeeya tartanka koobka adduunka.
Waxaa kaloo uu dab ka shidayay kooxdiisa Faransiiska, Rennes isagoo u dhaliyay 13 gool oo ka dhigtay isaga inuu noqdo laacibka 5aad ee ugu gool dhalinta badan tartanka heerka 1aad ee dalka Faransiiska.
Inkastoo Gyan uusan u ciyaarin mid ka mid ah naadiyada ugu waaweyn Yurub, haddana FIFA waxay aqoonsatay waxtarka ciyaarihiisa guud ahaan iyagoo u magacaabay inuu ka mid noqdo 23-ka ciyaartoy ee loo soo xulay in laga soo dhex saaro laacibka adduunka ugu fiican sanadka 2010.
Hadda waa inaan u caleema saarno boqorka Afrika maadaama sharaf u keenay naadigiisa Yurub, dalkiisa iyo qaaradda Afrika intaba.